Xiaomi na-egosi onye ntụgharị okwu na ọgụgụ isi Artificial nke sụgharịrị gaa n'asụsụ 14 | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi nyere onye ntụgharị okwu ihe ọgụgụ isi nke sitere na asụsụ 14
Ọ bụrụ na e nwere ihe Xiaomi nwere n’ihu ndị na-asọmpi ya, ọ bụ na ọ bụ akara na-anwa anwa ịme ihe ọ bụla enweghị atụ. Na-eche ihe doro anya? Chọọ ndepụta nke Asia ma ị ga-ahụ ya. Nke kacha ọhụrụ bụ onye ntụgharị akpa, nke na-ejikọ Artificial Intelligence na nwere ike ịtụgharị asụsụ n'asụsụ iri na anọ n'otu oge.
Ndi ntụgharị ntụgharị elektrọnik na akpa abụghị ihe ọhụụ ọhụrụ; Iri afọ ole na ole gara aga, anyị na ha biri. Infọdụ n'ụdị igwe mgbako na ụfọdụ n'ụdị obere laptọọpụ. Otú ọ dị, nke a na-atụgharị uche na ihe ikpeazụ na-abịakwute anyị bụ nke a Xiaomi Konjac AI ọ nwere ọnụ ọchị.
Ejiri Xanomi Konjac AI mee ya nke oma - o nwere onye siri Apple Remote? N'otu aka ahụ, na dị ka e gosiri site Gizmochina, agba ya maara nke anyị nwere ike ịchọta na kọmputa Apple dị iche iche. Vinghapụ myirịta dị n'akụkụ, nke a Xiaomi Konjac AI nwere ike ịkọwapụta n'otu oge gaa asụsụ 14 dị iche iche. Yabụ, enweghịzị ihe ngọpụ maka ịgaghị njem mba ọzọ na asụsụ ahụ bụ nsogbu.
N'otu aka ahụ, na dịka ngwaahịa Xiaomi ọ bụla, otu n'ime njirimara ndị na-adọta mmasị kachasị bụ ọnụahịa ya. Nke a bụ yuan 299 nke itinye ntughari ọ na-anọ na ihe 38 euro. Ka ọ dị ugbu a, Xiaomi Konjac AI abụghị naanị onye ntụgharị okwu ọ bụla. Nke a abụghị naanị tugharia n'uzo okike site na Amamịghe echiche nke etinyere n'ime onye ntụgharị Microsoft - companieslọ ọrụ abụọ ahụ mechiri nkwekọrịta mmekọrịta na nso nso a- mana ọ nwekwara ike ịnata iwu olu iji rụọ ọrụ. Nke ahụ bụ, ịnwere ike ịrịọ ya ka ọ kpọọ egwu; jụọ gị amụma ihu igwe; gwa ya ka o nye gi akuko a n igwe okwu, wdg. Nke a bụ ekele nyemaka onye na-enyere aka Xiao AI.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi nyere onye ntụgharị okwu ihe ọgụgụ isi nke sitere na asụsụ 14